दलान नेपाल : नागरिकतामा अंगीकृत प्रावधान - वैवाहिक स्वतन्त्रता माथी अंकुश लगाउने चलखेल !
यदी तपाईहरु अब सक्षम हुनु हुन्न भने अरु कसैको जिन्दगीलाई वर्वाद पनि नबनाउनुस । किनकी भारतीय छोरीहरु भागेर तपाईहरु काहा आएको छैन । उनीहरु एउटा रिती रिवाज र परम्पराको तहत संस्कृतिक मर्यादा अन्र्तगत तपाईहरुको घरमा आउने गर्छन । महिलाहरु औचित्य विहिन बनाउने अधिकार तपाईहरु कसै संग छैन । म प्रश्न गर्न चाहन्छ, काहा छन हामीहरुको महिला आयोग ? काहा छन हाम्रो मानव अधिकार आयोग ?
यसले मुख्य गरी वैवाहिक स्वतन्त्रता माथी अंकुश लगाउन गईरहेको छ । विदेशी पुरुष संग विवाह गरेको महिलाले ७ बर्ष सम्म नागरिकताका लागी पर्खनु पर्ने ? त्यो विच कुनै कारण वस श्रीमानको मृत्यू हुन गयो, उनले त्यो विचमा पाएको बच्चाको भविष्य के हुन्छ ? एकै छिन कल्पना गर्नुस ? यसको जवाफ राज्यले दिन सक्छ ? आमा बन्नु नारीको वरदान हो । तर यसलाई अभिसापमा तपाईहरु नबनाउनुस ? तपाईले कानुनले यसलाई अपराध सावित गर्न लागेका छन ।
काठमाडौको एउटा तप्काले भन्नालान कि यो समस्या मधेश र भारतको मात्रै हो र ? तर मेरो वुझाईमा यसले ९५ प्रतिशत प्रभाव मधेशी समुदाय र सिमापारिका भारतीय समुदाय विचको रोटी वेटीकै सम्बन्धमा पर्छ ।
एक अध्यनका अनुसार सन् १९९१ को जनगणना अनुसार भारतमा जन्मेका नेपालीहरुको संख्या कुल जनसङ्ख्याको २.४ प्रतिशत छन् भने नेपालमा जन्मेका भारतीयहरु संख्या त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको ०.०७ प्रतिशत छन् ।
तराइमधेशमा भारतमा जन्मेकाहरूको सङ्ख्या तराइमधेशको कुल जनसङ्ख्याको ४.४ प्रतिशत छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीचको बसाइँसराइको एउटा प्रमुख कारण विहेवारी हो । साामान्यत बसाइँसराइमा युवा–पुरुषहरूको बाहुल्य हुन्छ, तर विहेवारीको कारण नेपाल र भारतको बसाइँसराइमा महिलाहरू पनि उल्लेख्य छन् । सन् १९९१ को जनगणनामा नेपालको तराईमा भारतमा जन्मेका ३,७८,६९२ नेपालीमध्ये २,८५,३४७ (७५.३ प्रतिशत) महिला देखिएका थिए ।
त्यस्तै, सन् १९८१ को भारतीय जनगणनाले बिहार, उत्तरप्रदेश, सिक्किम र पश्चिम बङ्गालका भारतीयहरूमा नेपालमा जन्मेका मध्ये क्रमशः ८९.०, ५६.५, ५२.७ र ४१.१ प्रतिशत महिला थिए ।
दीप्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको हिन्दी विभागको प्रमुख छिन ।